Gbasara anyị - Hebei Gorgeous Bike Co., Ltd.
Ogo Klaasị mbụ, Nchịkwa Klaasị Nke mbụ, yana Ọrụ Klaasị Mbụ
Ọmarịcha bike factory e guzobere na 2015.
Ọmarịcha ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe bụ mpaghara nke square mita 10,000.
Enwere ndị ọrụ karịrị 70 na ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwaahịa a na-ere karịa mpaghara 20 na obodo ukwu dị na china.
Hebei ọmarịcha Bike Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta na nhazi nke ịnyịnya ígwè ụmụaka, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, ụgbọ ala na-agba ọsọ, na ụdị ngwa ngwa igwe kwụ otu ebe. Anyị nwere otu njikwa njikwa dị elu na otu ndị ọrụ R&D ọkachamara nwere ozi ngwa ngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ọgbara ọhụrụ nke na-anapụta ma na-akpachapụ anya maka usoro ndị ahịa. ANY HAVE nwere ndị na-emepụta ụlọ ọrụ anyị maka ụlọ ọrụ TI & TUBE NA EGO zuru ezu. Factorylọ ọrụ a dị na Xingtai City, Mpaghara Hebei. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi kachasị mma na ọnọdụ okporo ụzọ dị mma na-enyere ụlọ ọrụ aka ịbanye ngwa ahịa ụwa ngwa ngwa wee bụrụ otu n'ime ndị na-emepụta ịnyịnya ígwè ụmụaka kachasị na China.A na-etolite ngwaahịa niile nke ọma site na ụlọ ọrụ anyị gụnyere nyocha, imewe, injinia, ire ere na ọrụ.
Site na 2020, anyị guzobere ngalaba mbupụ azụmahịa nke mba ọzọ iji mepụta ahịa na mba ọzọ yana ọrụ ya dị elu na ngwaahịa dị elu. N'otu oge ahụ, anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye arụmọrụ na-arụpụta ihe ma mepụta ngwaahịa mbụ ndị na-egbo mkpa ụwa. Ọmarịcha agbaso na-agbanwe agbanwe nke "na-adị ndụ site na mma, mmepe site na ọrụ", ma na-ele mma nke ngwaahịa mma na otutu management dị ka ndị na-akwọ ụgbọala maka mmepe nke enterprise, na na-mgbe niile na-aga n'ihu na nduzi nke "mbụ na klas mma, Nhazi ụlọ akwụkwọ mbụ, na ọrụ nke klaasị ". ANY WE NA-EKPERE MGBE Ọ BONGR FOR N'TLỌ NCHE B E N'ỌNW..